Home » Copy/Paste » ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်ဖြစ်ချင်လျှင်
ကျနော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ပါ…၊
နားလည်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားကြည့်ရတယ်။စာရေးသူရဲ့ စေတနာကိုလေးစားပါတယ်။ရှုပ်နေသလားလို့ ပါအကိုရာ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ကံ ကံ၏အကျိုးတရားကို သိမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံ ဆိုတာ ပြုလုပ်ခြင်းပါဘဲ။ မြတ်စွာဘုရားသည် ကယ်တင်ရှင် မဟုတ်ပါ။ မိမိကိုသာကိုးကွယ်ရာဟု ဘုရားကဟောပြထားပါတယ်။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ တကယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရယ်လို့ ဟောထားတဲ့ တရားခွေလေးရှိပါတယ်။ မိဘကိုးကွယ်လို့ လိုက်ကိုးကွယ်လိုက်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်ယုံကြည်လို့ ကိုးကွယ်လိုက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းလေးကို ဟောထားတာပါ။ ဒီခွေလေးကို နာယူလိုက်ရတော့တကယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။ ရွှေလင်းယုန်ဆရာတော် ဟောထားတာပါ။ယုံကြည်မှုကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေတဲ့ တရားခွေလေးပါ။
မေသခင်အခုလို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းကို ၀မ်းမြောက်စွာကြိုဆိုပါတယ်။
(မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ တကယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ )
ထပ်ဆင့် ရှင်းပြပေးတော့ ပိုပီး အဆင်ပြေသွားစေပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ maythakhin ။
အောက်ပါသုတ္တန်ကို ဆိုလို ချင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် ဘုရားစာပေတွေကိုလေ့လာလို့ပြောချင်တာဖြစ်မယ်။
ဆရာတော် အရှင်အာဒိစ္စ၀ံသ ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ “ဘိက္ခဝေ” ဆိုတဲ့ အသံ (စာအုပ်ထဲမှာ)ကြားတာနဲ့ ဒါ အတုလား၊ အစစ်လားဆိုတာကိုတောင် မစိစစ်ကြတော့ဘူးတဲ့။
နောက်တစ်ခါ ( နောက်တစ်ယောက်) လာပြန်ပြီလား ဟေ ……..
True Answer thanks for your link. အခုမှ ဒီဆိုဒ်ကို သိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေရှင်။
ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါနှင့် ပတ်သက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ နားလည်မှု
၁။ ။ရင်၌စူးဝင်သောမြှားအား ဦးစွာ နှုတ်ယူခြင်းဆေးကုခြင်း မပြုဘဲ မည်သို့သောပုဂ္ဂိုလ် ပစ်သနည်း.မည်သည့်လေး နှင့်မည်သည့်အရပ်မှ ပစ်သည်ဟု စစ်ဆေးနေခြင်းသည်၎င်း။
ဇိနတ္ထပကာသနီကျမ်းပါ ဗုဒ္ဓ၀င်ဖြစ်စဉ်၊ ၅၅၀ ဇာတ်တော်တွေမှာပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ဂျိန်းဘုရားရဲ့ ဖြစ်စဉ်၊ ဂျိန်းဘုရားဟောတဲ့ ဇတ်တော်တွေတစ်ချို့ သွားတူနေတယ်လို့ သုတေသီတွေက သုံးသပ်ကြတယ်။ တောင်တွင်းကြီးရှင်ဥက္ကကတော့ အသောကခေတ်မှာ ဂျိန်းတွေဆီကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဆီကို ရောက်လာတယ်လို့ ယူဆပြထားတယ်။ ရှင်ဥက္ကက သေပြီးနောက်မဖြစ်ကို ယူထားတော့ ၅၅၀ ဇာတ်တော်တွေဘယ်လက်ခံလို့ ရမှာလဲ၊ မေတ္တာရှင်ရွှေပြည် အရှင်ဇ၀နကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆီကနေသာ ဂျိန်းတွေဆီရောက်ပြီး ရောသွားတာလို့ သုံးသပ်ပြထားသေးတယ်။ သူကတော့ သူကိုယ်တိုင် ၀က် ဘ၀ကလာတာလို့ အပီယုံကြည်နေတော့ ၅၅၀ တွေကို အပြည့် လက်ခံတော့ လက်မခံတဲ့ ရှင်ဥက္ကကို မတည့်တော့ဘူးပေါ့။ အဗျာကထနတရားတွေကို ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တယ်ဆိုရင် သေပြီးနောက် ဖြစ်တဲ့ အယူဖြစ်တဲ့ ၅၅၀ ဇာတ်တော်တွေမှာ အရင်ဘ၀တွေက ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ မဟောတန်ရာ။ အကယ်၍ ဗုဒ္ဓ သူကိုယ်တိုင် ဝေသန္တရာတို့၊ မဟာဇနကတို့ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဟောခဲ့ရင် အဗျာကထနတရားတွေကို ဗုဒ္ဓမဟောခဲ့တန်ရာ လို့ ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေလည်း ရှိကြသည်။
အချို့သုတေသီတွေကတော့ ဗုဒ္ဓက သူ့ခေတ်သူ့အခါက လူတွေနားလည်လောက်တဲ့ ပုံပြင်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ တရားဟောခဲ့တာ နောက်ပိုင်းခေတ်တွေကျတော့မှ ဒီပုံပြင်၊ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံနဲ့ နောက်လူ (ကျီသဲလေးထပ်တို့လို အဌကထာ၊ ဋီကာဆရာ)တွေက ပုံဖေါ်ကြတာလို့လည်း သုံးသပ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရှင်ဥက္ကက သေပြီးနောက်မဖြစ်ကို ယူထားတော့ဆိုတာ ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကကို နားမလည်သေးလို့ ဖြစ်မှာပါ။
mggwa ရေ ကိုထွန်းတို့က သေပြီးနောက် မဖြစ်ဆိုတာကိုလည်း မပြောသလို၊ ဖြစ်ဆိုတာကိုလည်း မပြောပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုထွန်းရဲ့ခံယူချက်က ငြိမ်းချမ်းခြင်း၏လမ်းစမဟုတ်လို့ဘဲ။ ကိုယ်တို့ရဲ့ အဓိကလမ်းကြောင်းကတော့ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ မဂ္ဂအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ (၈)ပါးသော လမ်းညွှန်ချက်ကိုဘဲ ဦးထိပ်ထားပါတယ်။